Mifankatia ny Vavolombelon’i Jehovah | Diary 2015
Sekoly tena nilaina
Notahin’i Jehovah ny asa mafy nataon’ny mpanompony. Nisy 16 354 ny salanisan’ny mpitory teto, tamin’ny 1994, ary 259 ny fiangonana. Vao mainka nilaina ny anti-panahy sy mpanampy amin’ny fanompoana mahay, mba hikarakara an’izany olona maro be izany. Neken’ny Filan-kevi-pitantanana àry ny hanaovana Sekoly Fampiofanana ho Amin’ny Fanompoana, tamin’io taona io. Lasa Sekolin’ny Mpitory Ilay Fanjakana izy io izao.
Kilasy 25 no vita hatramin’ny Oktobra 2011, ary mpianatra 600 teo ho eo no efa nahazo diplaoma. Ny 71 amin’ireo izao no mpisava lalana manokana, 5 manao ny asan’ny faritra, ary antsasany mahery no manao fanompoana manontolo andro hafa. Natao tao amin’ny sampana ny kilasy folo voalohany. Efa misy trano natokana ho amin’izany anefa izao ao amin’ilay tanàna atao hoe Villa González, ka any indray io sekoly io no atao, nanomboka tamin’ny kilasy faha-11.
“Mikarakara ny mpiara-mivavaka aminy ny Vavolombelon’i Jehovah”
Nandalo teto ny Rivo-doza Georges tamin’ny 22 Septambra 1998. Tena nandravarava izy io, satria nahatratra 190 kilaometatra isan’ora ny rivotra nentiny. An’arivony no tsy nanan-kialofana ary 300 mahery no maty. Nataon’ny Komitin’ny Vonjy Rano Vaky toby fanampiana tra-boina ny Efitrano Fanjakana iray tao La Romana. Nanampy azy tamin’izany ny Komitim-paritra Momba ny Fanorenana. Mpiasa an-tsitrapo 300 teo ho eo no nandray anjara tamin’ny fanampiana vonjy rano vaky, ka anisan’izany ireo Vavolombelona avy any amin’ny firenena 16.
Efitrano Fanjakana 23 sy trano fonenana 800 mahery no tsy maintsy namboarina na naverina naorina. Rava tanteraka, ohatra, ny tranon’i Carmen, mpisava lalana maharitra efa zokiolona. Tena kivy izy, satria efa tao foana izy no nipetraka nandritra ny 38 taona. Tsy omby tratra anefa ny hafaliany, rehefa tonga hanorina trano vaovao ho azy ny rahalahy 15. Hoy i Carmen: “Tsy manadino antsika mihitsy i Jehovah, ary mikarakara antsika. Mba jereo ange ity trano tsara tarehy naorin’ireo anadahy ho ahy ity e! Vaky vava ny mpiray tanàna amiko hoe: ‘Mikarakara ny mpiara-mivavaka aminy ny Vavolombelon’i Jehovah. Tena mifankatia ry zareo.’ ” Fandre matetika ny teny toy izany eran’ny Repoblika Dominikanina, rehefa tonga nanampy ny mpiray finoana aminy ny mpamonjy tra-boina.
Nitondra fahavoazana be ny Rivo-doza Georges. Nahazo fanampiana sy fampaherezana anefa ireo rahalahy tra-boina, noho ny ezaka nataon’ny vahoakan’i Jehovah. Fa ny tena zava-dehibe dia hoe lasa nahazo voninahitra i Jehovah, ilay tena mpampionona antsika.
Nohafainganina ny fanorenana Efitrano Fanjakana
Nirohotra nankao amin’ny fandaminana ny olona, ka nilaina ny Efitrano Fanjakana maro kokoa. Tamin’ny Novambra 2000 ny Repoblika Dominikanina no nanomboka nanorina Efitrano Fanjakana tamin’ny vola fanampiana ny tany mahantra. Roa volana eo ho eo àry ny fiangonana iray, dia efa mahavita efitrano mendrika sy tsara tarehy. Efitrano 145 teo ho eo no efa naorina na nohavaozin’ireo ekipa roa mpanao fanorenana, hatramin’ny Septambra 2011.
Fitoriana vita ho azy ireny efitrano ireny sy ireo mpiasa an-tsitrapo nahay niara-niasa. Nisy toerana nety tsara hanorenana Efitrano Fanjakana, ohatra, tao amin’ny tanàna kely iray. Niresaka tamin’ny tompon’ilay tany ny mpisava lalana manokana iray raha azo vidina ilay tany. Hoy anefa ilay rangahy: “Reraka eo fotsiny ianao fa izaho indray dia tsy hivarotra an’io aminareo. Mainka moa raha hoe hanamboaranareo fiangonana ilay izy.”
Namangy ny zokiny lahy tany Puerto Plata ilay rangahy, taoriana kelin’izay. Vavolombelon’i Jehovah io zokiny io, ary narary mafy. Gaga ilay rangahy rehefa tonga tany fa hay nisy fianakaviana Vavolombelon’i Jehovah nitondra an’ilay zokiny tany amin-dry zareo mba hokarakaraina. Ry zareo no nitondra azy nankany amin’ny dokotera sy nivory ary nitory. Nanontaniany ilay zokiny hoe ohatrinona ny vola aloany amin’ilay fianakaviana mba hanaovany an’izany rehetra izany. Hoy ilay zokiny: “Tsy karamaina ireo ka. Rahalahiko ange ireo e.”
“Mbola tsy nahita olona miray hina sy tsara fanahy be hoatr’izao mihitsy aho hatramin’izay!”
Tena nanohina ny fon’ilay rangahy ny nahita hoe tsara fanahy be tamin’ny zokiny ny Vavolombelona. Nantsoiny àry ilay mpisava lalana manokana, ary nilazany fa hamidiny aminy indray ilay tany. Novidin’ireo rahalahy ilay tany ary naorina ny efitrano. Tsy tia Vavolombelon’i Jehovah mihitsy ny vadin’ilay rangahy taloha. Hoy anefa izy rehefa nahita an’ireo rahalahy niara-nanorina an’ilay efitrano: “Mbola tsy nahita olona miray hina sy tsara fanahy be hoatr’izao mihitsy aho hatramin’izay!”